Torohevitra farany momba an'i Etazonia, Angletera, UE ho an'ny Fanjakan'ny Eswatini izay navoakan'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Eswatini Breaking News » Torohevitra farany momba an'i Etazonia, Angletera, UE ho an'ny Fanjakan'ny Eswatini izay navoakan'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Eswatini Breaking News • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fampahalalana diso tafahoatra ao amin'ny media sosialy dia noho ny herisetra ao amin'ny Fanjakan'i Eswatini raha ny loharanom-baovao avy amin'ny governemanta. Mihevitra ny manam-pahaizana momba ny politika fa vao mainka niharatsy ny fikomiana avy any ivelany noho ny zava-misy fa eken'i Eswatini ny Repoblikan'i Sina fantatra amin'ny anarana hoe Taiwan amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina miaraka amin'ny Renivohitra any Beijing.
Ny fihetsiketsehana sy ny fandrobana dia voarakitra ao amin'ny fanjakana afrikanina any Eswatini.
Ny vahoaka Eswatini dia nitaky ny demokrasia. Ity andrana am-pilaminana voalohany ity dia nopotehin'ny singa mpanao heloka bevava nanararaotra ny toe-javatra marefo mba handroba, handroba ary hamono. Herisetra bebe kokoa no namaliana izany.
Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny governemanta dia niverina ny fahatsapana fitoniana ary niantso ny Sibaya ny Mpanjaka HM Mswati.
The Birao fizahantany afrikanina is manana ny foibeny ao Eswatini ary nanakoako ny fanambarana niarahan'ny Etazonia, ny Vondron Eropeana, ary ny Fanjakana anglisy nitaky fitoniana sy fifanakalozan-kevitra eo amin'ny antoko rehetra.
Any afovoan'i Afrika atsimo sy Mozambika, nijaly noho ny Amnesty International ny firenena efa namaritra ho toy ny “fanafihana an-tsokosoko ny zon'olombelona” rehefa manandrana mihazona ny fahefana ny fanjakan'ny mpanjaka.
Ny fizahan-tany sy ny hetsika ara-kolontsaina dia mpamatsy vola lehibe amin'ity toerana tsy manam-paharoa afrikanina ity.
Amin'ny maha-mpanjaka monja sisa tavela any Afrika, ny kolontsaina sy ny vakoka dia voahidy mafy amin'ny lafin'ny fiainana Swazi rehetra, miantoka fiantohana tsy hay hadinoina ho an'ireo rehetra mitsidika. Ity no teny filamatra ao amin'ny Fampiroboroboana ny fizahan-tany any Eswatini Website.
HM Mpanjaka Mswati Ny antson'i King ho any Sibaya ny zoma dia nihaona tamin'ny fihetsiky ny olona maro.
Araka ny Ny fotoan'ny Swaziland, nilaza ny sasany fa faly fa afaka niresaka tamin'ny firenena ihany ny Mpanjaka tamin'ny farany taorian'ny fihetsiketsehana mpanohana ny demokrasia izay niafara tamin'ny herisetra, fandrobana ary fanimbana fananana. Ny sasany kosa nilaza fa nino izy ireo fa tsy ho ela dia hitodika any amin'ny firenena, indrindra noho ny onja fahatelo amin'ny COVID-19.
Ny mpanjaka dia nanao antso ho an'i Sibaya tamin'ny alàlan'ny Indvuna Themba Ginindza tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety natao tao amin'ny Ludzidzini Royal Residence omaly. Nilaza ny Mpanjaka fa ny emaSwati rehetra dia tokony hipetraka ao anaty omby amin'ny 10 maraina. Nilaza ny Mpanjaka fa halefa mivantana ny fizotry ny raharaha Sibaya mba hahafahan'ireo izay tsy tafakatra an-toerana avy amin'ny fiononan'ny tranony amin'ny alàlan'ny fantsom-baovao rehetra. Nasongadin'ny mpanjaka fa ireo izay hanaraka ny fizotran'ny fampitam-baovao dia tokony hihaino tsara izay holazaina.